Revizionista mpikatsaka fiovàna ve ny GV? Momba ny politika fanontàna lahatsoratra vao haingana ato amin’ny GV · Global Voices teny Malagasy
Revizionista mpikatsaka fiovàna ve ny GV? Momba ny politika fanontàna lahatsoratra vao haingana ato amin'ny GV
Voadika ny 06 Jolay 2019 15:05 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Oktobra 2015)
Vao haingana,voasinton'ity lahatsoratra ( vao haingana ihany koa ) teo amin'ny blaogin'ny vondrompiarahamonina ity ny saiko:
Mpampihorohoro. Mpikomy. Mpitsoa-ponenana tsy ara-dalàna. Inona no fonosin'ny anarana?
Afaka fotoana fohy, raha mbola tsy voavakinao, voalaza ao fa neken'ireo Toniandahatsoratry ny Trano Famoahambaovao, ankoatra ny zavatra hafa, ny “tsy hampiasa ny fomba fiteny hoe horohoro, asa fampihorohoroana ary mpampihorohoro”, raha tsy hoe tafiditra anaty fitanisàna tenin'olona ilay izy.
Na dia hitako fa tena azo ekena aza ny antony ho an'ireo hetsika sy tranga ankehitriny (sasany), heveriko fa tsy tokony ampiharina amin'ny zava-nisy sy vondrona efa tamin'ny lasa izany. Toy ny hoe, amin'ny alalan'ny hazokely majika iray, manova tampoka ny tantara isika ary tsy iray tamin'ireo vondrona mpampihorohoro tena lozabe intsony ny Shining Path avy any Perou.
Haiko tamin'ny fomba maherivaika izany rehefa novain'ny tniandahatsoratry ny Latam ny iray tamin'ireo lahatsoratro nikasika ny peroviana iray mpampihorohoro izay vao haingana no navoaka ny fonja taorian'ny nanefany ny saziny (eto ny vaovao mikasika izany tranga izany amin'ny teny Anglisy, eto ny lahatsoratro tamin'ny teny Espaniola). Tsy mekeko ireo fanovana ary nolazaiko tamin'ilay Talen'ny Fanontana Lahatsoratra ato aminay. Taorian'ny fifandefasana imailaka vitsivitsy, hitako fa tsy hiova hevitra mihisy ilay ramatoa. Araka izany, nekenay ny hanala ny lahatsoratro tsy ho eo amin'ilay sehatra.
Amiko, tsy resaka di-doha na kiribiby ny fakàna io fanapahankevitra io, fa fahatsiarovana ireo Peroviana an'arivony maro maty noho ny fampihorohoroana nataon'ireo nanapa-kevitra ny hanafina ny tavany nefa hametraka ny herisetra ary niezaka ny haka ny fahefana nefa tsy mahalàla izay antony. Mipetraka aminà tanàna iray feno fahatsiarovana izany vanim-potoana izany aho, izay isanandro dia ahitako olona maro avy amin'ny vondrompiarahamonina nafindra toerana vokatry ny hetsik'ireo rantsana mpampihorohoro. Niaina izany vanim-potoana izany aho, ary hamita-tena raha hanaiky ny tsy hiantso azy ireo ho mpampihorohoro izay saika efa nahavita namotika ny fireneko. Mikasika ny saiko sy ny marina amiko izany.
Noho izany, mizara ity miaraka aminareo aho satria mbola mino fa toerana iray ho an'ny fangaraharàna sy ny fandeferana ato amin'ny GV, tsy hoe hiezaka ny hiverina amin'ny fanapahankevitra momba ilay lahatsoratro, fa mba hiresahana miraka amin'ireo GVrs hafa mikasika io lohahevitra io:
Fahamarinana ara-politika mihoatra ny tokony ho izy ve ny tsy iantsoana ireo mpampihorohoro hoe mpampihorohoro?
Tsy maintsy fanapahankevitra amin'ny fanaovana gazety ve izany?
Ny fahatsiarovana sy fampihavanana ve tsy dingana izay tsy maintsy hiantsoantsika ny zavatra amin'ny tena anarany ve mba hahatratrarana ny fandriampahalemana sy hamelana heloka?
Raha ohatra ka miantso ny zavatra sasany tany amin'ny lasa ho toy ny fampihorohoroana ny firenena iray manontolo, manana ny zo handà izany ve ny hafa?
Misy olona voakasika manokan'ny fampihorohoroana ve ao amin'io lisitra io? Inona no heviny mikasika azy io?
Fantatro fa mety samihafa ny tranga ara-politika isaky ny firenena tsirairay izay nahita ny fiandohan'ny hetsika fampihorohoroana, saingy hanatevina ny fifanakalozana rehetra mikasika izany lohahevitra izany. Ohatra, mbola afaka mandrakotra ny hevitry ny sasany ihany ny fomba fijery romantika omena ny ady anaty akata, toy ny any amin'ireo firenena ao Amerika Latina tany amin'ny andian-taona 60 sy 70, nefa amin'izao fotoana izao, matetika ampiasaina amin'ny tranga hafa ny hoe ‘ady anaty akata’ sy ny ‘fampihorohoroana’. Noho izany… Tena manantena aho fa hisy fifampiresahana mahaliana hatao mikasika ity lohahevitra ity.
Misaotra anao! ary miala tsiny tamin'ilay lohahevitra somary manaitaitra, karazana votoaty mampilendalenda isarihana fotsiny iny…
PS: Tsy nisy GVr tohina tao anatin'ilay dingana nofaritana tetsy aloha.
Inona no mandrahona ny ala honko ao Tobago?